Ny fitsipiky ny fiasan'ny milina fanamboarana azota
PSA fanerena swing adsorption azota famokarana mekanika azota fitsipiky ny karbonina molekiola sivana dia afaka mandray oksizenina sy azota eny amin'ny rivotra amin'ny fotoana iray ihany, ary ny adsorption fahaiza-manao ihany koa ny mitombo amin'ny fitomboan'ny tsindry, ary amin'ny tsindry mitovy oksizenina sy azota equilibrium adso...
Sarotra ny fampandehanana ny famokarana argon ao amin'ny vondrona fanasarahana rivotra.
Ny fanitsiana tanteraka ny argon dia ny manasaraka ny oksizenina amin'ny argon ao anaty tsanganana argon crude mba hahazoana argon crude miaraka amin'ny votoatin'ny oksizenina latsaky ny 1 × 10-6 mivantana, ary avy eo manasaraka azy amin'ny argon tsara mba hahazoana argon tsara amin'ny fahadiovan'ny 99.999%. Miaraka amin'ny fivoarana haingana ny teknolojia fanasarahana rivotra sy ...
Antony fanadihadiana ny tsy fahombiazan'ny milina mangatsiaka sy maina
Ny olona, ​​araka ny anarany, dia ampiasaina amin'ny fitaovana fampangatsiahana ny zavatra, ny fampiharana isan-karazany dia midadasika, matetika hita amin'ny ankapobeny dia ampiasaina ho toy ny ampahany amin'ny tsindry ambony compressor, amin'ny fampiharana mahazatra sy ny fandidiana dingana, dia tsy maintsy hihaona olona sasany. tsy fahombiazana, manaraka isika ...
Tsy maintsy apetraka ao ambadiky ny compressor an'habakabaka ve ny fanamainana?
Tsy maintsy apetraka ao amin'ny compressor rivotra ve ny fitaovana aorian'ny fitsaboana? Ny valiny dia eny, raha ilaina amin'ny compressor rivotra ny orinasanao, dia tsy maintsy fantatrao fa tsy maintsy apetraka ny compressor rivotra aorian'ny fanamainana. Taorian'ny rivotra compressor, ny rivotra fitehirizana tanky, sivana sy ny fanamainana sy ny pu ...
Fitaovana fanasarahana entona: mbola laharam-pahamehana ny fametrahana ny toerana
Ny normal vaovao no ho lohahevitry ny drafitry ny dimy taona faha-13. Avy amin'ny fomba fijery ny sehatra isan-karazany ny entona fisarahana fampiharana fitaovana, taorian'ny faha-125 taona fampandrosoana, solika, simika, zezika, metallurgy, fitaovana fanorenana, milina sy ny saha hafa, ary sary...
Fampiasana azota sasany amin'ny indostria
Ao anatin'ny dingan'ny famokarana indostrialy, ny fitaovana misy poizina sy mampidi-doza, mikorontana, mirehitra ary mipoaka dia mila arovan'ny entona inert. Ny nitrogène, amin'ny maha-iray amin'ireo gaza inert, dia manana loharano entona manankarena, misy votoaty 79% eny amin'ny rivotra, ary mihamitombo hatrany amin'ny famokarana. Amin'izao...
Fampiasana sy fomba fanomanana mahazatra ny azota
Voalohany, ny toetran'ny nitrogen Nitrogen, ao anatin'ny toe-javatra mahazatra, dia gazy tsy misy loko, tsy misy tsiro, tsy misy fofona ary matetika tsy misy poizina. 78,12% amin'ny totalin'ny atmosfera (ampahan'ny voky). Amin'ny mari-pana ara-dalàna dia entona izy io. Amin'ny tsindrin'ny atmosfera mahazatra dia lasa l...
Fampiharana ny rivotra fanasarahana vondrona amin'ny vy sy ny vy orinasa (fandrendrehana lafaoro fanapoahana mahazatra sy ny fampihenana ny levona dingana sy ny kajy amin'ny oksizenina)
Betsaka ny gazy indostrialy toy ny oksizenina, azota ary argon no ampiasaina amin'ny dingan'ny fandrendrehana ny orinasa vy sy vy. Oxygène no tena ampiasaina amin'ny fipoahana lafaoro, fandoroana fampihenana ny fandoroana lafaoro, mpanova, herinaratra lafaoro fandoroana; Ny azota dia ampiasaina indrindra amin'ny famehezana lafaoro, prot ...
Inona no atao hoe fisarahana rivotra? Ny fitaovana fanasarahana rivotra sy ny fizotran'ny rafitra dia manambara
Fantatry ny rehetra ny karazana compressor sy turbine etona rehetra, saingy azonao tsara ve ny anjara asany amin'ny fisarahan'ny rivotra? Atrikasa fanasarahana rivotra ao amin'ny orinasa iray, fantatrao ve hoe manao ahoana izany? Ny fisarahan'ny rivotra, raha tsorina, dia ampiasaina hanasaraka ireo singa isan-karazany amin'ny entona rivotra, ny ...